merolagani - 'सतही सूचनाले लगानीकर्ता भ्रमित हुनसक्ने स्थिति राम्रो होइन'
'सतही सूचनाले लगानीकर्ता भ्रमित हुनसक्ने स्थिति राम्रो होइन'
Jun 16, 2018 Merolagani
हामी लगानीकर्ताका संघ संस्थाहरुले सकारात्मक र उपलब्धि भएका कुराहरुको जानकारी सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई दिनुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र धेरै समयदेखि पूँजी बजारमा छाएको कालो बादल र खस्केको मनोबललाई उस्कन सक्छ ।
केही अनलाइन र लगानीकर्ताबाटै पूँजीगत लाभकर र अनलाइन ट्रेडिङ्गका बिषयमा सही सन्देश जान सकिरहेको छैन कि जस्तो लागेको छ । सतही सूचनाले लगानीकर्ता भ्रमित हुनसक्ने स्थिति राम्रो होइन । सबै लगानीकर्ताहरु आफ्नो हक हीतप्रति संबेदनशील छन् ।
बजारमा आउने सतही सूचनालाई भन्दा वास्तविक तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै लगानीकर्ता अगाडि बढ्नुपर्छ । शेयर बजारमा लाखौं लाख लगानीकर्ता, त्यसमा पनि गृहणी, बिद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्रका कर्मचारी समेत आवद्ध छन् ।
उनीहरुले धेरै मेहनत गरेर जम्मा गरेको बचत, बृद्धभत्ता, पेन्सन जस्ता कुराहरु पूँजी बजारमा लगाएका छन् । उनीहरुलाई सही सूचना दिन सकिएन भने मानसिक तनाव हुन्छ ।
लगानीकर्ताको नाताले मैले कुनै किसिमको प्रलोभनमा नपरी निस्वार्थ रुपमा यिनै लगानकिर्ताको हक र हीतमा काम गर्दै र बोल्दै, लेख्दै आएको छु । म बाचुन्जेल लगानीकर्तालाई निस्वार्थ भावले सही सूचना दिने प्रण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारको स्तरको रुपमा हेर्न चाहन्छु ।
पूँजी बजारमा अहिले १५ खर्बको पूँजीकरण भएको छ । यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भइसकेको छ । यसर्थ नेप्से, धितोपत्र बोर्ड,सिडिएसी, बीमा समिति र राष्ट्र बैंकबिच समन्वय गरेर सकिन्छ भने एकद्वार प्रणाली अर्न्तगत पूँजी बजारको बिकास बिस्तार र लगानीकर्तामैत्री नियम बनाउँदै झन् झन् सहज बनाउँदै लानुपर्छ ।
अर्थमन्त्रालय र नियामक निकायहरुले भ्रम, अन्यौल,डर,त्रास बाधा उत्पन्न गर्ने गरी केही काम गर्नु हुँदैन । यसले लगानीकर्तामा नकारात्मक असर पर्न गई पूँजी बजारको दीर्घकालीन बिकासमा बाधा पुग्छ ।
७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर
उद्योगी ब्यापारीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले गत जेठ २८ गते आयोजना भएको गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि डा. युवराज खतिवडा र बिशेष अतिथिका रुपमा राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा देशकै प्रतिष्ठित उद्योगपति, व्यापारी, एशोसियट र बस्तुगत क्षेत्रका प्रतिनिधिको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
बजेट पछिको सो अर्न्तकृयामा ३०- ३५ जना उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका प्रश्न र सुझाव राखेका थिए । सो कार्यक्रममा लगानीकर्ताका तीनवटै संघ, संस्थाका प्रतिनिधित्व गर्दै मैले पूँजी बजारको अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या माथि ध्यान आकर्षण गराएको थिँए ।
पूँजीगत लाभकर ५ बाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पु-याएको अवस्था एकातिर थियो भने अर्कातिर लगानीकर्तालाई बज्रपात हुने गरी पूँजी बजारले थेग्नै नसक्ने गरी बोनस र हकप्रद सेयरको मूल्य रु १०० कायम गरी त्यो भन्दा माथिको मूल्यमा बिक्री गर्दा त्यसलाई नाफा मानेर ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लगाएको अवस्था थियो ।
कार्यक्रममा सबै सहभागीको प्रश्नको उत्तर दिनेक्रममा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले ७.५ प्रतिशतको पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो, हामी चाँडै कार्यबिधि बनाउँछौं । यस्तो सकारात्मक कुरा छ, सबैलाई सेयर गर्नुहोस भन्नुभयो ।
उहाँले बोनस र हकप्रदको बेसरेट कायम गर्ने कुरामा एउटा समिति बनाएर छलफलबाटै समाधानमा पुगाैंला भनेर आश्वस्त समेत पार्नुभयो । अर्थमन्त्रालयमा हामी डेलिगेशन जाँदा पनि राजश्व सचिव ढुंगानाले ७.५ प्रतिशतको लाभांश करलाई अन्तिम कर हो भनेर भन्नु भएकै हो ।
तर उहाँको यो भनाईलाई हामीले कहिले पनि प्रचार-प्रसार गरेनौं । किनभने अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा राजस्व सचिवले देशभरका उद्योगी व्यवसायी र मिडियाहरुको अगाडि ७.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हो भनेर सार्वजनिक कार्यक्रम मै बोलेपछि सबै सामु छलङ्गै हुने नै भयो ।
(राैनियार इन्भेष्टर्स फोरम नेपालका उपाध्यक्ष हुन् । )
बजार छिर्ने र नाफा सुरक्षित गर्ने लगानीकर्ताबीच चर्को बार्गेनिङ्ग
असी अंकले उक्लिएपछि शेयरबजारमा करेक्शन, पोर्टफोलियो बदल्दै लगानीकर्ता
झण्डै ३२ अंकले बढेको बजारमा सिटिजन्स् बैंक सहित ४६ कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो
नयाँ वर्ष लागेपछि नेप्से दिनहुँ नयाँ उचाईमा, कारोबार पनि अर्ब नाघ्यो
सूचीकृत कम्पनीको अर्थहिन वर्गिकरण, गोरखकाली रबर र नबिल बैंक एउटै समूहमा !
शेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिँदा सूचकसँगै कारोबारमा बढोत्तरी